Warbixinta Dabagalka Xogta 2012 | Martech Zone
Sabtida, Maarso 2, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Goorma ayey macaamiisha diyaar u yihiin inay wadaagaan xogtooda? Immisa xog ah? Haddii aadan horey u ogaan, Yurub caadi ahaan waxay horseed u tahay arrimaha xogta iyo arrimaha gaarka ah. Shuruucdoodu aad ayey u adag tahay waxayna aad ugu xeel dheer yihiin hababka qabashada xogta. Waqooyiga Ameerika waxay u egtahay waxoogaa dib u dhac ah waxaanan leenahay wax badan oo ka mid ah dabeecadda laissez-faire - inta badan wax badan baa la soo ururiyaa wax yarna waa lagu sameeyaa.
Rabitaanka macaamiisha ee ah inaad macluumaadka la wadaagto magacyada ayaa gantaallo ku dhacay 18-kii bilood ee la soo dhaafay. Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay muujineysaa koror ka yimid sanadkii hore taasoo muujineysa warka wanaagsan ee suuqleyda kuwaas oo umuuqda inay si tartiib tartiib ah ugu guuleysanayaan kalsoonida macaamiisha. Laga soo bilaabo Warbixinta Dabagalka Xogta ee DMA ee 2012
Warbixintan iyo infographic-ka ayaa dhiirrigelinaya maaddaama ay bixinayso caddayn in ay jirto rabitaan sii kordhaya oo macaamiisha ah si ay ula wadaagaan xogtooda. Warbixinta ayaa muujisay in, marka hababka ugu fiican loo isticmaalo oo macaamiisha loo siiyo suuqgeyn ay rabaan - isweydaarsiga xogta ayaa aad uga fudud.
Tags: Dataraadinta xogtadmadma uk